သူခိုးဓားပြဒုစရိုက်​သမားများကပါ ဦးညွှတ်​ရ​သောမြန်​မာအနုပညာရှင်​၂​ယောက်​ ဆိုပဲ..။ - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / အဆိုတော်များ / သူခိုးဓားပြဒုစရိုက်​သမားများကပါ ဦးညွှတ်​ရ​သောမြန်​မာအနုပညာရှင်​၂​ယောက်​ ဆိုပဲ..။
သူခိုးဓားပြဒုစရိုက်​သမားများကပါ ဦးညွှတ်​ရ​သောမြန်​မာအနုပညာရှင်​၂​ယောက်​ ဆိုပဲ..။
Apann Pyay 3:00 PM သရုပ်ဆောင်များ , အဆိုတော်များ Edit
သူနဲ့အတူနီကိုရဲလည်းပါပါတယ်​..တဖက်​ကကားသမား​တွေကတုတ်​​တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်​​အောင်​ လာကြ​သောအခါနီကိုရဲက​တော့ကား​လော့ချထားဖို့​ပြောပါတယ်​ . ထူးအိမ်​သင်​ဟာကားတံခါးကိုဖွင့်​ပြီးထွက်​​တွေ့တဲ့အခါ….ဟာ…ကိုငှက်​ကြီးဟဆိုပြီးတုတ်​​တွေပစ်​ချ​ပြေးဖက်​ကာ သူတို့မှားတာဖြစ်​ပါ​ကြောင်း​တောင်းပန်​ရင်း..ဘီယာ​တောင်​ထပ်​လိုက်​တိုက်​ခဲ့ပါ​သေးတယ်​တဲ့ဗျာ…
..သူခိုးတစ်​​ယောက်​ဟာအိမ်​တအိမ်​ကမီးခံ ​သေတ္တာ ကိုဖောက်​ထွင်းပြီးပါပြီ…ပစ္စည်း ​တွေထုတ်​ပြီးဆင်းဖို့ကြံစဉ်​..သူခိုးဟာအ​တွေးဝင်​လာပါတယ်​..ဒီ​လောက်​ခမ်းနားကြီးကျယ်​တဲ့အိမ်​ကြီးမှာဘယ်​သူ​တွေများ​နေကြသလဲလို့သိချင်​စိတ်​နဲ့..အိမ်​ရှင်​အခန်းထဲထိသွားကာ​ဝင်​ကြည့်​ပါ​တော့တယ်​..
သူနဲ့အတူနီကိုရဲလညျးပါပါတယျ​..တဖကျ​ကကားသမား​တှကေတုတျ​​တှနေဲ့ဝိုငျးရိုကျ​​အောငျ​ လာကွ​သောအခါနီကိုရဲက​တော့ကား​လော့ခထြားဖို့​ပွောပါတယျ​ . ထူးအိမျ​သငျ​ဟာကားတံခါးကိုဖှငျ့​ပွီးထှကျ​​တှတေဲ့အခါ….ဟာ…ကိုငှကျ​ကွီးဟဆိုပွီးတုတျ​​တှပေဈ​ခြ​ပွေးဖကျ​ကာ သူတို့မှားတာဖွဈ​ပါ​ကွောငျး​တောငျးပနျ​ရငျး..ဘီယာ​တောငျ​ထပျ​လိုကျ​တိုကျ​ခဲ့ပါ​သေးတယျ​တဲ့ဗြာ…
..သူခိုးတဈ​​ယောကျ​ဟာအိမျ​တအိမျ​ကမီးခံ ​သတ်ေတာ ကိုဖောကျ​ထှငျးပွီးပါပွီ…ပစ်စညျး ​တှထေုတျ​ပွီးဆငျးဖို့ကွံစဉျ​..သူခိုးဟာအ​တှေးဝငျ​လာပါတယျ​..ဒီ​လောကျ​ခမျးနားကွီးကယျြ​တဲ့အိမျ​ကွီးမှာဘယျ​သူ​တှမြေား​နကွေသလဲလို့သိခငျြ​စိတျ​နဲ့..အိမျ​ရှငျ​အခနျးထဲထိသှားကာ​ဝငျ​ကွညျ့​ပါ​တော့တယျ​..